Budata First Flight - Fly the Nest APK maka Android
Budata First Flight - Fly the Nest
Free Budata maka Android (68.00 MB)
Budata First Flight - Fly the Nest,
Ụgbọ elu mbụ - Fly the Nest bụ mmepụta ị ga-enwe obi ụtọ ugboro abụọ ma ọ bụrụ na-amasị gị egwuregwu nwere ihe nkiri ochie. Ị na-ejikwa anụmanụ ndị yi uwe pụrụ iche, nke injin ụgbọ elu na-akwado, na egwuregwu a, nke ị nwere ike igwu egwu na obere ekwentị gam akporo nke nwere usoro njikwa otu mmetụ, nagbanyeghị ebe ọ nọ.
Negwuregwu ebe ị na-agbalị iji igwe jet na-efe efe ọbọgwụ, enwe, nnụnụ, aṅụ na ọtụtụ anụmanụ ndị ọzọ, ị gaghị emebi emebi dị ka o kwere mee nebe ị na-enweghị ike ịchọpụta ebe ị nọ. Ewezuga mkpọda nke ikpo okwu, ị nweghị ihe mgbochi ọ bụla na-akpali akpali dị ka ịgbapụ ike nke injin jet gị ma ọ bụ ihe ndị e kere eke na-abịa nụzọ gị, mana usoro nke ikpo okwu gbajiri nke ukwuu nke na-efe efe mgbe otu ebe chọrọ nkà. Ọ dịghị mkpa ka ị mee mgbalị pụrụ iche iji fega ndị odide ahụ. Ihe niile ị na-eme bụ pịa ma jide ka ikuku ha, hapụ mkpịsị aka gị ka ha gbadata.
First Flight - Fly the Nest Ụdịdị
Nha faịlụ: 68.00 MB